Vokatry ny toetry nyandro : lasibatry ny gripa ny kilonga | NewsMada
Vokatry ny toetry nyandro : lasibatry ny gripa ny kilonga
Par Taratra sur 24/01/2017
Mandrivo-maina ny andro, tsy mety latsaka ny orana. “Misy fiantraikany amin’ny fahasalaman’ny ankizy io toetr’andro io”, raha ny filazan’ny dokotera Rija, etsy Analamahitsy Cité. Betsaka ireo ankizy voan’ny gripa tonga ao aminy.
Mikoha-maina ny ankizy, mitsory ny lelo ary mivadika fanaviana izany avy eo. Reraka ary tsy mazoto homana ny ankizy tratran’izany gripa izany. Mahatratra 7 ka hatramin’ny 10 isan’andro ny akizy tonga entin’ny ray aman-dreniny tsaboina ao amin’ity dokotera ity tao anatin’ny roa herinandro izao.
Tsy tokony hotehirizina any an-trano ny ankizy rehefa tratran’ny gripa. Tokony hoentina any amin’ny dokotera rehafa tsy mihafana ao anatin’ny roa andro ny hafanany. Mitarika any amin’ny fahasemporana ny gripa rehefa tsy voatsabo ara-potoana ka vao mainka hanasarotra ny fitsaboana.
Miaina anaty rivo-maina ny olona eto Antananarivo. Somary miovaova ihany koa ny mari-pana ka vao mainka mampahazo aina ny otrikaretina ka tratran’ny gripa avy hatrany ireo marefo, indrindra ny kilonga, raha ny fanazavan’ny dokotera hatrany.
Manentana ny olona hihinana voankazo betsaka ny dokotera hanana hery fiarovana betsaka mba tsy handairan’ny otrikaretina mora foana ny vatana.